Ahoana no atao hahazoana izany ary ahoana no hitazonana ny hatsaran’ny hodi-tava iray tsy manana olana ? Indro ny torohevitra tokony ampidirina ao anaty fahazarana mikolo tarehy, mba hahatonga ny hodi-tavanao ho tsara kalitao manmandrakariva.
1. “Maquillage” tsy manentsina mason-koditra
Rehefa manao haingon-tava ianao dia tsy tokony hanentsina ny mason-koditrao izy ireo fa mamela azy hiaina malalaka tsara. Raha tsy izay dia hihombo ao ny tsy fahatomombanan’ny tarehy ary lasa hanimba sy hanaratsy ny endrikao tsikelikely ireo haingon-tava fanaonao isan’andro.
2. 10 minitra isa-kerinandro ho an’ny maska
Manokàna 10 minitra isa-kerinandro hikoloana ny tarehy. Maska manadio sady mikolo no ampiasaina. Sady manome aina azy izany no mamelombelona ihany koa.
3. Akora mifanaraka amin’ny tarehy ihany
Fantaro ny sokajin-koditrao. Izay mifanaraka aminy sy mety aminy ihany no ampiasao. Isa-maraina dia amandino ny tarehy ary arovy amin’ny masoandro raha hivoaka. Ny alina indray, dia diovy ary koloy arakaraky ny filàny sy ny lesoka eo aminy. Tarehy madio, malefaka sy malandina isan’andro no tanjona.
4. Mialohan’ny hatory, diovy foana ny tarehy
Ity dingana ity dia isan’ireo dingana fototra mihitsy. Diovy foana ny tarehinao mialohan’ny hatory. Aza entina matory ny loto nangonina nandritra ny tontolo andro, satria amin’ny alina no fotoana fihavaozan’ny hoditra. Rehefa madio sy mandina ny tarehy no entina matory, dia mora ho azy ny mihavao sy mihatsara. Manampy azy koa ny fakanao aina sy hery azo avy amin’ny torimaso ampy.